ImacOS 11.3 ilungisa inkqubo yokhuseleko kwindlela yokusebenza | Ndisuka mac
ImacOS 11.3 ilungisa inkqubo yokhuseleko kwindlela yokusebenza
iapile ikhuphe inguqulelo ye-macOS 11.3 yomntu wonke izolo; Emva kokubheja okuninzi kunye novavanyo oluninzi ngoncedo lwabaphuhlisi, ilixesha lokuba uqalise inguqulelo entsha yale nkqubo yokusebenza kuluntu ngokubanzi. Kule nguqulo intsha, kukhutshwe isiqwenga esiqinisekisa ukuba abasebenzisi uya kukhuseleka kumngxunya wokhuseleko ezazikhona kwaye zisengozini yedatha yabasebenzisi beMac.
Ngokukhutshwa kwenguqulelo entsha ye-macOS 11.3, Apple ilungise ibug enokuthi ivumele abahlaseli ukuba badlule kwiindlela zokhuseleko ukusuka kwi-Mac ngoxwebhu olubi. Lo mngxunya wezokhuseleko uvumele abahlaseli ukuba benze isicelo esibi esinokulingisa uxwebhu. Oku kwaxelwa yiTechCrunch. Umcwaningi woKhuseleko uCedric Owens uqale wafumanisa i-bug ngo-Matshi.
Ngokuka-Cedric, oqinisekisile impazamo ngeemvavanyo zakhe. Yenza i-app ye-proof-of-concept ethathe ithuba lesiphene ukumilisela i-Calculator app. Uye wakwazi ukufumanisa ukuba: “Konke umsebenzisi kuya kufuneka akwenze kukucofa kabini kwaye akukho zilumkiso okanye izilumkiso eziza kwenziwa ukusuka kwi-macOS. »
Le app yedemo yayingenabungozi. Nangona kunjalo, umntu onezinye izizathu kunye nezizathu ezinganyanisekanga unokusebenzisa ithuba lokuba sesichengeni sokufikelela kude idatha eyimfihlo okanye olunye ulwazi kumatshini womsebenzisi ngokubakhohlisa ekucofeni uxwebhu olwenziweyo.
U-Apple uthe wayilungisa i-bug kwi-macOS Big Sur 11.3, eyathi yakhutshwa yi-Cupertino tech giant ngoMvulo. Ukongeza kule nguqulo, iApple ikhuphe ii-patches ukulungisa ibug kwi-macOS Catalina nakwi-macOS Mojave. Kungenxa yoko le nto uhlaziyo lubaluleke kakhulu kwaye kutheni luyimfuneko ukuba ungachithi ixesha elininzi kwaye hlaziya kwiinguqulelo ezintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » ImacOS 11.3 ilungisa inkqubo yokhuseleko kwindlela yokusebenza
Uhlaziyo kwakhona lweMacOS Catalina 10.15.7